Best Hi-Fi Turntables 2017 - mutengi kuti gwaro - China 10TURNTABLES
> Best Hi-Fi Turntables 2017 - mutengi kuti gwaro
Hi Fi Turntables Specification Kuenzanisa
Brand Name ndiro Drive maitiro aimhanya katuriji Buttons
Audio- Technica AT-LP120-USB Silver aruminiyamu Belt -tyaira 2 havukavu AT95E Check Price
Teac LP-R550USB Turntable chikweshe Belt -tyaira 3speed TEAC STL103X2 Check Price
Numark TTUSB	 Aluninum Belt -tyaira 2 havukavu Audio-Technica katuriji Check Price
Teac TN-300 Analog Turntable (Black) Aluminum Die-nyaya Belt -tyaira 2 havukavu MM TYPE (audio-technica AT95E Check Price
Fluance RT80 High Fidelity Vinyl Turntable Record Player Aluninum Belt -tyaira 2 havukavu MM TYPE (Audio-technica AT95E) Check Price
TEAC LP-P1000 Turntable chikweshe Belt -tyaira 3speed TEAC STL103X2 Check Price
Pro-Ject - Debut Carbon DC (Black) aruminiyamu Belt -tyaira 2 havukavu Ortofon OM5E Cartridge pre-akatasva Check Price
Rega - RP1 Turntable (White) New ichiyangarara girazi 'Optiwhite' yakabwinyiswa pomukombero 12mm Belt -tyaira 2 havukavu rega Carbon Check Price
Music Hall MMF 2.2LE Limited Edition Audiophile Turntable mumhanzi horo mweya kubvongodzwa-magineti katuriji pamwe yokutsiva Belt -tyaira 2 havukavu MMF 2.2 Check Price
U-Dzokai Audio - Kutenderera Zuva Kwepasi Plus Turntable (zvitema) Acrylic Belt -tyaira 2 havukavu Ortofon OM5E pamwe elliptical nedhaimani chinyoreso Check Price
Channel Kuparadzana: > 20 db pa 1 kHz
Tracking Force Range: 1.5-2.5 magiramu 2.0 magiramu (20 MN) inokurudzirwa club simba
Recommended Load Impedance: 47,000 ohms Output 3.5 MV (1 kHz, 5 masendimita / chik)
Channel Balance: mukati 2.0 db
Chinyoreso Type: 0,4 X 0,7 thousand elliptical nedhaimani chinyoreso
Cantilever: chiwanikwa chubhu
Kutanga zvinhu kure, Audio-Technica ndiyo isingachinji muchiso kubva Japan kuti vaudzewo kuti Audio indasitiri kwemakore akawanda kuti zvigadzirwa vari kutengeka, rinoyemurika zvikuru uye anorumbidzwa. Panyaya dzisiri dzemazuva yokuteerera, imi hamugoni kuenda chakaipa vakabuditsa Audio-Technica AT-LP120-USB. womuenzaniso Iri zvakananga-nemotokari professionalturntable kuti ane zvakajeka kurira izvo zvinoita zvinoshamisa kudaro inokwanisika mutengo.
Nokuti $ 289, unenge kuwana dzichikunetsa akasununguka turntable sezvo ane switchable yakavakwa muna preamplifier pamwe mutsetse-pamwero rca goho netambo; zvichireva iwe haungaiswi vaida chero mamwe nenhumbi kubatanidza turntable yako redhiyo. The yakanakisisa chikamu pamusoro turntable ichi ndechokuti ane USB chengarava unokubvumira dzaiitirwa yenyu Mac kana Windows kombiyuta uye digitize zvinyorwa chaunofarira. chigadzirwa ichi kunouya ane Mac / PC enderana audacity Software uye USB waya. Zvinoitawo anouya ane replaceble katuriji uye musoro-deko.
muenzaniso uyu ane 3 aimhanya zvakasiyana; 33-1 / 3, 45 uye 78RPM. Naizvozvo, uchazonakidzwa kutamba uye vanakidzwe chero zvinyorwa kubva muunganidzwa wako Kukurumidza nokuda womuenzaniso iri kusara kupindirana. Kana kuti hazvina kukwana kuti vaswedere mufunge, muenzaniso uyu unobvumidza kuti kuchinja kukwirira kwenzwi kubudikidza 10% kana 20% uye ine mukuru-zvakarurama Goldstone raitungamirirwa nenamo zvechizarira. It Ane S-zvakaumbwa matauriro ruoko uungane chinjika counterweight, Anti kuita mutserendende muchando kugadziridzwa uyewo matauriro-ruoko kukwirira kuchinja uye zvechizarira. Asina kuenda kubudikidza yakaoma vanochengeta-up muitiro, muenzaniso uyu anopa vatengi mukana wekuti nzira kuteerera kufarira zvinyorwa zvavo iine yakakwirira torque injini.
Its yakananga-nemotokari injini anomununura nokukurumidza kutanga kupota.
33-1 / 3, 45 uye 78 RPM akateerera aimhanya kubvumira kuti unakidzwe zvinyorwa yose muunganidzwa yenyu.
The akanzwa bonde rinoita kuunza yakawanda kunofambira mberi kusvikira pechiso raive nebutiro.
CD sahwira Section USB Section Turntable Section Tape Section General
CD-R / RW Kurekodha kubva Phono, Tape, Tuner, aux
Mudhirowa-mhando CD sahwira
Rec Level Control kuti Analogue Source Kurekodha
Wodzokorora (1 / ALL), Shuffle, 32-njanji Program Play
USB Audio Out kubva Phono, CD, Tape, Tuner, aux kuti PC
MP3 / WMA / PCM * Kurekodha pamusoro PC / Mac
3-nokukurumidza Turntable (33-1 / 3, 45, 78rpm)
Kukaseti Tape Player
High / Normal Tape zvinzvimbo
Play, Mira, FWD, REW Operation
PLL Synthesized AM / FM redhiyo Tuner
Michina Volume Control
Bass-Reflex mhando Speakers
Vatauri: 2 "-3/4 Full Range Cone X 2
3.5 W + 3.5 W gudzazwi Output Power
Audio Inzwa Zvinotaurwa: x 1 (rca)
Headphone: x 1 (redhiyo Mini)
Divi (W X H X D): 18-1 / 22 "X 9-1 / 16" X 15-3 / 8 "(470 X 230 X 390 mm)
Kana uri kutsvaka turntable kuti unobvumira nyore zvokurekodhwa marekodzi, makaseti, uye redhiyo, tarisa hapana mberi sezvo iyi muenzaniso kwamuri. Haangooni nayo vachikubvumira kunyora, uyewo ane webetsero Audio mazano kuna CD-R / RW. It anonyora LPs, maCD, redhiyo uye makaseti kuna PC ari nyore chimiro Via imwe USB kubatana. Ndicho 3.5W + 3.5W amplifiers uye bass-dzepanguva mhando redhiyo vakurukuri akagadzirirwa kuumba vakasiyana kurira izvozvo kunonyaradza kwamuri nzeve.
Umbwa muJapan, TEAC yave mukugadzira makaseti zvigadzirwa kwemakore anopfuura 63 makore. Saka unogona bheji zvigadzirwa zvavo yakavimbika. Nokuti mutengo $ 276, unenge kuwana 3-nokukurumidza analoginen turntable pamwe car-kudzoka chinhu. Zvivanakire yako, uyewo ane rca Pin Jack chiyamuro / goho kubatanidza mutambi michina zvakarekodhwa huripo chero. Huru kutengesa dzinokosha muenzaniso uyu ndiyo CD Burner uye kukaseti achipfeka.
Kuti vari akati, izvozvo kuti aesthetics zvinoshamisa pamwe zvishoma kubatwa munhu ano uye Retro aone. Suiting zvaunofarira, uri kubvumirwa kuva kana Chinyorwa kana otomatiki yokuvira njanji nhamba Paanenge achinyora kuti CD. A kure kuzvidzora kunouya chikwata ichi uyewo kudzora mashandiro chinhambwe kubva chikwata. Ndiyo muenzaniso wakakwana kumativi ose.
Bright uye nyore kuverenga LCD Ratidza.
Zviri vakazvitsaurira mabhatani kuti anowanzoshandiswa mashandiro kunovimbisa nyore.
It ane zvishoma ruzha pose ine raive nebutiro ichirira.
Product Weight (pamwe kavha): 12lbs
Master CTN miganhu: 20.27 "X 17.16" X 6,85 "
Nenamo: +/- 10%, 33 1/3 RPM kana 45 RPM oparesheni
Zvinoshandisa pakurima: 1/8 "redhiyo mutsetse pamwero
Pakutanga kubva Rhode Island of US, Numark chinhu hachizi yakasimbiswa chinoita kuti uye anovandudza kwazvo makaseti ruzivo kuti DJs uye Musicians munyika nokuda 40 adarika. The Numark TTUSB Turntable ane zvose zvinhu inoda kuva unhu convert turntable.
Kana uri kushamisika pamusoro wayo kumhanya, turntable ichi anoedzesera 33 1/3 uye 45 RPM. It ane chinjika Anti-kuita mutserendende muchando kuzvidzora kuti kwakawedzera redhiyo BALANCInG. It anewo USB chengarava kuti kubatana pakati turntable uye kana PC kana Mac. Rinewo 1/8 "redhiyo mutsetse kwezvavakaisa rca mutsetse outputs pamwe chinjika nenamo kudzora + 10%. netambo All zvakakodzera anopiwa kuti kubatanidza turntable wako pachako kombiyuta kana redhiyo playback hurongwa; zvose zvivanakire kwenyu. Izvi zvinoita nyore kutendeutsa LPs vose digitaalinen zvinogona.
magadzirirwo Its kunoshamisa. It ane chaizvo ano Kutarira uye rimwe shoko kutsanangura zviri "futuristic". Coated nesirivha, ichi ndicho chimwe chezvinhu zvikuru kwezvokufuka akatarisa mienzaniso uchawana mumusika. Saka vari kuti, Numark TTUSB turntable ndewe sendi ose zvauri kuisa mari $ 133 kuti maoko ako pamusoro.
It ane diecast uye machine psac aruminiyamu Ndiro nani vakawanda uye zvakawanda inowirirana Disc nokukurumidza.
It Ane S zvakaumbwa inzwi ruoko.
Zvinogona chamupidigori zvakare dzitsanye achitamba.
Turntable chikamu Tonearm chikamu Cartridge chikamu Phono Equalizer gudzazwi Analog Output USB Output chikamu Power Power manwiro Chaizvoizvo Dimensions Weight Accessories
Kutyaira System: Belt Drive
Kutenderera Speed kushanduka: +/- 2%
Wow uye Flutter: 0.2%
Signal-to-fuertes Ratio: 67dB kana yakakwirira (A-weighted, 20kHz LPF), 60dB kana yepamusoro (unweighted, 20kHz LPF)
Ndiro: Aluminum Die-chakakandirwa
Dhayamita pamusoro Ndiro: 12 ", 30cm
Type: kunofambira mberi Balance, Straight
Zvinobudirira Arm Length: 8.8 ", 223mm
Chinyoreso Pressure Range: 0 kusvika 5g
Akatsigira Cartridge Weight: 3.5 kuti 6.5g
Anti-Skating Kugadziridzwa: Akatsigira
Type: MM mhando (audio-technica AT95E fekitari yakaiswa)
Chinyoreso Rakaumbwa: Elliptical
Chinyoreso Construction: waakaita Round Shank
Mount: Half padiki
Frequency Response: 20Hz kuti 20kHz
Channel Kuparadzana: 20dB pa 1kHz
Club Force: 1.5 kuti 2.5g
Vertical Tracking Angle: 20 madhigirii
Akatsigira Load Impedance: 47k ohms
Output Voltage: 3.5mV (1kHz, 5cm / chik.)
Chinyoreso Pressure: 2.0g +/- 0.5g
Head-goko Weight: 10g (kusanganisira screws, Nuts uye Wires)
Replacement chinyoreso: Audio-Technica ATN95E
Mhando gudzazwi: MM mhando (On / Thru switchable)
Connector: rca Pin Jack (Gold-kuifukidza)
Connector: USB B mhando
Output Signal: PCM 48kHz / 16-ikakuruma
Akatsigira Os: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Os X Lion (10.7), Os X Mountain Lion (10.8), Os X Mavericks (10.9), Os X Yosemite (10.10), Os X El Capitan (10.11 ), macOS Sierra (10.12)
AC 100 kusvika 240V, 50 / 60Hz
1.5W (asingasviki 0.5W pa Standby)
Approx. 10.8 LBS. 4.9 makirogiramu
Rabha Sheet, EP Adapter, Counter Weight, Musoro-goko (audio-technica AT95E), Ndiro, Guruva Cover, rabha Feet nokoko Guruva Cover x2, hinji x2, rca Audio Cable, AC Adapter (GPE053A-120050-Z), wayo Manual (kusanganisira Warranty Card)
Chimwe pamusoro notch womuenzaniso kubva Teac, ari TN-300 chinhu analoginen turntable pamwe pakuvara phono kwerubwinyo rwakagara rwuripo gudzazwi pamwe USB digitaalinen goho. Uyu Chinyorwa bhandi-nemotokari turntable hunotsigira 33 kana 45 RPM. Pakutanga kubva Japan, ichi kambani pasina mubvunzo unobereka pamusoro notch turntables.
Mukana wekuti mutengo $ 269 kuti turntable, ungada kuwedzera izvi Wishlist yenyu. The USB goho unokubvumira uchatamisa mumhanzi kubva raive nebutiro zvinyorwa kuna Mac wako kana PC. It anewo pakuvara foni equalizer iyo inotiita iwe ufambe pakati INORATIDZA uye PHONO. Rakagadzirirwa ane chawo dema uye anotarisa asina. Kunze kwaizvozvo, rine kumativi ose ari kubatwa esirivha woripa classy Kutarira.
Kunze kuva dzakanaka design, muenzaniso uyu unouya ane Audio-Technica MMVM mhando giramufomu katuriji AT95E. Chimwe chinoshamisa chinhu pamusoro turntable ichi ndechokuti ane goridhe kuifukidza zviteshi kuti oxidation nemishonga. Pasinei ane pfupi garandi, zvinhu uye akaitwa muenzaniso uyu zvechokwadi kunoita nokuda kwayo. In mhedziso, kana iri mukati bhajeti yenyu, usazeza kuwana muenzaniso uyu sezvo zvakazonaka.
The Audio-Technica katuriji pave nokure nani inzwi kumativi ose.
Nokukurumidza inogona kuchinjwa pamusoro bhatani dhesiki.
wokuenzanisira ichi kunouya ane pfupi garandi.
MAKOROKOTA EMU CABINET Magadzirirwo TURNTABLE Magadzirirwo TONEARM Magadzirirwo katuriji Magadzirirwo rabha bhandi Magadzirirwo Output Magadzirirwo SIMBA Specification GENERAL Magadzirirwo
MAKOROKOTA EMU CABINET ACHASHANDISWA: MDF
Kupedzisa: Painted High Gloss (Black)
MUGURUVA KAVHA: Hongu - Tinted
Chiratidzo-TO-KUNYAUDZWA RESHIYO (WEIGHTED): 67dB kana yakakwirira (A-weighted, 20kHz LPF)
Chiratidzo-TO-KUNYAUDZWA RESHIYO (UNWEIGHTED): 60dB kana yakakwirira (unweighted, 20kHz LPF)
Dhayamita OF Ndiro: 12 ", 30cm
TONEARM TYPE: kunofambira mberi Nepakati, S-Type
KUTSIGIRWA katuriji uremu: 3.5 kuti 6.5g
Anti-Skating kuchinja: Hongu
PIVOT Kubara: Hongu
TONEARM ACHASHANDISWA: Aluminum
UBUDIRIRE TONEARM Misa: 28.2 magiramu
UBUDIRIRE TONEARM Length: 224mm
HEADSHELL Mount: H-4 bhayoneti Mount
TONEARM YAKAKWIRIRA: 17mm
Katuriji TYPE: Moving Magnet (MM)
CATRIDGE MUENZANISO: Audio Technica: AT91
Yokutsiva chinyoreso: ATN91
Chinyoreso: 0.6mil waakaita Conical (Diamond)
Frequency nezvokutanga: 20-20,000Hz
Channel Kuparadzana: 18dB pa 1kHz
Channel pachiyero; 2.5dB zvichidzika pa 1kHz
Mutoro IMPEDANCE / CAPACITANCE: 47k Ohms / 100pF
Katuriji uremu: 5.0g (+/- 0.5g)
Akakurudzira Tracking simba: 2.0g (+/- 0.5g)
Mira Tracking Angle: 20 madhigirii
CONNECTOR: rca (Gold-kuifukidza)
PREAMP: Hongu, PHONO / ZVINOKOSHA Switchable
ZVINOKOSHA Output: 140mV (-17dBV)
Ground Chirwere: Hongu
Chiyamuro: 100V - 240V AC (50 / 60Hz)
Miganhu: 16.5 "X 5.5" X 13,75 "
CERTIFICATIONS: FCC vaipupurirwa, RoHS, CUL / Ul
UNIT uremu: 4,5 makirogiramu (9,9 LB)
Uchishandisa tembiricha: 20 ° C
CHII aisanganisira: RT80 Turntable, Guruva Cover, 45 Adapter, Felt kutedzemuka Mat, 6ft rca Cable With Ground Wire, 100V - 240V (50 / 60Hz) AC Power Adapter, Quick Start Guide, Hwangu Hwose Customer Support, 2 Year Manufacturer kuti Warranty
Chinhu chikuru Musumo muenzaniso uyu Fluance; anouya aine shoma katuriji, nedhaimani chinyoreso, bhanhire nemotokari, yakavakwa-mu preamp, chinjika counterweight pamwe Anti-Skating uye kosi vaima dema huni cabinet. Has kuti kubatwa yako? Kuti recreate chokupika yacho vemifananidzo akaitirwa, shoma zvinoumba muenzaniso uyu inobvumira ichi yakakwirira kuvimbika bhandi inopepereswa turntable kubereka yakachena analoginen kunzeve ruzivo.
Fluance ane kambani iri yakatangwa Ontario uye vakatenda kuti zvakanaka turntable hazvirevi kuva kunodhura. Uchida katuriji inobereka chinoshamisa kutsanangurika? Tarira mberi sezvo wokuenzanisira ichi kunouya rurefu unongotaura AT95E Audio Technica katuriji. Uyewo, nedhaimani ellipitical miromo yesimbi chinyoreso akagadzirirwa chamber wako rekodhi grooves pamwe zvakarurama zvikuru uye zvakarurama kuti mukuru tsananguro Audio. With yakadzikama aruminiyamu S-Type tonearm, akakwana playback inogona kubudirira uye izvi zvinoita chinyoreso iri vairambira wako Nhoroondo paburi rakadzika. Saka, kubudisa zvose Audio oudzame indistinguishable kubva pakutanga yakarekodwa.
The yakanaka walnuts apedza rinenge akarigadzirira kubva hwakasimba audio-mugiredhi (MDF) huni uye chinayo voga netsoka, imwe aruminiyamu mundiro, uye rabha pitikoti bonde chinoguma nani voga kubva vibrations ndisingadiwi. Dzevakawanda chiratidzo kutsanangurika rinobudiswa pamwe yepamusoro Texas zviridzwa 'preamp, pasi chinouraya uye goridhe kuifukidza rca mutsetse outputs rinopa kure noushamwari, inzwi kwechokwadi. Best chikamu, Fluance dzinovimbisa vatengi kuti hwose rutsigiro maererano zvivezwa zvavo. Nokuti $ 199,9, muenzaniso uyu kuba.
Mukuru chinyoreso kunoita kuti Kwakachena Analog kuteerera ruzivo.
Smooth playback rakanakira refu uchiteerera muzvirongwa.
Rakagadzirirwa chakakomba unongotaura.
It ane zvishomanana nokukurumidza nyaya.
Turntable chikamu Tuner chikamu CD Player chikamu MP3 Bluetooth® chikamu gudzazwi chikamu Audio zvinoshandisa pakurima Audio outputs pamahedhifoni goho Mutauriri chikamu zviumbu Chaizvoizvo miganhu Weight
Akatsigira Speed: 33-1 / 3, 45, 78 RPM
Wow uye Flutter: 0.25% (Jis WTD)
S / N reshiyo: 50dB kana kupfuura (IHF-A)
Cartridge: Ceramic redhiyo Type
Chinyoreso: STL-103 (nesafiri, nokuti LP / EP)
Tuner mhando: PLL Synthesized Tuner
Nhamba Presets: 20 AM + 20 FM
Akatsigira Disc: CD-DA, CD-R, CD-RW
Vaitsigira Formats: Audio CD, MP3, WMA
Zvakabudiswa Frequency: 16k kuti 48kHz
Bit rate: 8k kune 320kbps
WMA: DRM haritsigiri
Zvakabudiswa Frequency: 32k / 44.1k / 48kHz
Bit rate: 48k kune 192kbps
S / N reshiyo: 80dB kana kupfuura
Nhamba kunonyanyisa forodha: 255
Nhamba kunonyanyisa faira: 999
Kirasi: Class2 (Max Range 10M / 33 ft.)
Akatsigira Profile: A2DP, AVRCP
Akatsigira Codec: SBC X
Mukati Protection System: SCMS-T
AUX1 (Front): 3.5mm (1/8 ") redhiyo Mini Jack
Connector: 3.5mm (1/8 ") redhiyo Mini Jack
Type: Rear Bass-dzepanguva Type
Power PAKAPERA: AC120V, 60Hz (US / Canada) AC230V, 50Hz (UK / Europe)
Power kunwa: 25W
Main chikwata: 460 (W) × 215 (H) × 380 (D) mm18.1 "(W) X 8.5" (H) x 15,0 "(D)
Mutauri: 150 (W) × 250 (H) × 224 (D) neMM, 5,9 "(W) X 9,9" (H) x 9.1 "(D)
Main chikwata: 6.6kg
Accessories: Remote Control (RC-1312), Batteries nokuti Remote (AA X 2), Adapter nokuti EP, Turntable Cover, hinji X 2, Rubber Mat nokuti Turntable mundiro, AM kanyanga, FM kanyanga Cable, redhiyo Mini Plug Cable, Nomukurukuri Cables (3m / 10ft) x 2, Muridzi wacho Manual (Warranty Card)
Kubva Japan, TEAC hwapinda turntable indasitiri chaizvoizvo zvakanaka zvavo zvinoshamisa zvigadzirwa. Ivo tanga kuita turntables kwemakore anopfuura 60 uye kana kuti zvinongoratidza unyanzvi hwavo munzvimbo iyi. Kana muchitsvaka ane mu-imwe turntable, tarisa mberi. It Magadzirirwo zvinoshamisa kudaro dzakanaka Retro look.
womuenzaniso Uyu turntable redhiyo hurongwa kuti unouya CD, Makaralı uye redhiyo mabasa. Kazhinji kana tinotsvaka turntables tati nechokwadi kuti une zvose zvinhu zvaunoda. Tarira mberi sezvo muenzaniso uyu ane zvose zvinhu haufaniri kugara imwe. Nokuti mutengo $ 318, hunobvumira Wireless kubatana kubva smartphones, mapiritsi uye Laptops Via Makaralı. Zviri nyore ungave achawira kuda muenzaniso uyu abuda nayo.
Achitaura ayo kumhanya, uku 3-nokukurumidza turntable pamwe 33-1 / 3, 45 uye 78 RPM uye anobvumira playback kubva LP / EP uye SP zvinyorwa. Ndiyo goho simba riri 25 X 25 Watts uye vanobatanidzwa pasuru vari 2-Way Bass Reflex Speakers. Ndizvo chaizvo ngaakuitirei kuti mutengo wayo. Rinewo patireyi vachizvitakudza CD Player kuti inowirirana CD-R / RW discs uye MP3 / WMA mafaira. In mhedziso, ndiko here zvakanaka zvose woita turntable.
Rine kuti Retro 70 vanonzwa pamwe ano Tech zvakanakira.
The huni anokwezva uye dombo hwakasimba.
Nhoroondo anoridza zvakare kutsanya.
Kutyaira musimboti: bhandi nemotokari
Ndiro: 300mm simbi pamwe aifunga bonde
Mains vakatakura: Stainless simbi
Speed vasakukurwa: +/- 0,80%
Mureza ruzha: -68dB
Zvinobudirira ruoko length: 218.5mm
Zvinobudirira ruoko uremu: 6.0g
Club simba: 10-30mN
Power kubatana: 110/120 kana 230/240 Volt -50 kana 60 Hz
Included zvishongedzo: 15volts DC / 0.8A simba nemushonga, huruva pechifukidziro
Standby simba kunwa: <1 watt
Dimensions: 415 X 118 X 320mm (WXHXD) muvharo yakavharwa
Pro-Ject Audio Systems rakaumbwa muna 1990 mu Austria, zvisinei kugadzira yavo zvirimwa vari Czech Republic uye Slovakia. Izvi turntable nyanzvi nokuda Pro-Ject rakanakira-siyana kwakaita akadai multiroom mugadziriro (SONOS, HEOS etc), TVs, soundbars uye inotakurika Audio.
Chii ndafara pamusoro womuenzaniso ichi ndechokuti zviri nyore kumisa uye ane bhanire nemotokari ine silicone bhandi uye vakaderera vibration injini. With 8,6 "aruminiyamu tonearm pamwe nesafiri mabheyaringi uye pre-akatasva Ortofon OM5e katuriji, muenzaniso uyu kirasi pamusoro kunyange ine zvishoma pamawere mutengo $ 399. It ane yakavakwa muna phono kwerubwinyo rwakagara rwuripo gudzazwi pamwe analogue uye digitaalinen goho. Zvivanakire kwenyu, ine akaafukidza nendarama rca interconnect wire kunobatanidzwa uyewo.
Pane zvinofadza azvipire Kujeka maererano inzwi muenzaniso uyu. Rinewo kuridzwa yakachena uye penya acoustics. Achitaura magadzirirwo ayo, ndizvo zvachose vatema uye zviri zvikuru naka. It dai kuenda saka zvakanaka mumba mako mupenyu uye magadzirirwo ayo anenge wechipiri hapana. Chii chinoita muenzaniso uyu umire kubva zororo iri kuti inokosha turntable tsoka kuti zvinobudirira decoupling. Yose zvayo, muenzaniso uyu yairwara unokosha kufunga.
The tafura pacharo ane kunorumbidzwa Kutarira.
It ane chaizvo vasina kwavakarerekera unokwidza nokuderedza nomwero.
No otomatiki kudzoka nokuti ruoko.
All nzira kubva UK, rega ndiye hachizi tsime yakasimbiswa kuti unobereka tisaone Turntables. Ndokusaka zviri haashamisi ari RP1 chinhu chinoshamisa chigadzirwa kwakadaro. Akatemerwa mutengo pa $ 445 iyo zvishoma kupfuura turntables kumusoro, unenge notdisappoint iwe sezvazvakaita pamusoro notch.
It ane hachizi idzva rega RB101 tonearm ndizvozvo chaizvo anoyevedza. Uyewo, ine rega Carbon uchifamba magineti katuriji. Asi katuriji angasava zvakanakisisa chete pane. Saka vari akati, zviri pasi vibration injini ane yepamusoro uye ane zvakarurama chikuru chokuita pamwe gungano Sub-mundiro. For zvakaisvonaka Kasira Kugadzikana, rune zvose zvitsva Phenolic resinflywheel kushanda mundiro.
It Magadzirirwo zvinoshamisa. It zvinenge zvakazara vatema uye chena, achichipa chaiyo kwezvokufuka futuristic kutarira. Zviri ano kutarira richafa kutarisa zvinoshamisa kana akaisa chero pakona imba yenyu. With zviri kunzwisisa inzwi yakachena uye zvinoshamisa Specs, mungadai musina kutarira mberi kuti turntable. Pasina mubvunzo, chinhu kuba $ 445.
High unhu yakaderera vibration injini.
Need kunatsiridza katuriji.
Product Dimensions 13 x 17 X 4.5 nemainji
Kugadzirwa Czech Republic, Music Hall ndiye hachizi kuti chave kuita turntables kwemakore anopfuura 50. Experience kunokosha uye ndokusaka Music Hall ndomumwe mapiyona indasitiri ino.
Uyu 2-nokukurumidza turntable pamwe dynamically mwero Ndiro izvo zvinokosha kuwana inzwi akakwana. Ndiyo tonearm inopa chinjika VTA nokuda chaiwo katuriji kunangiswa. Uyewo, zviri dynamically mwero chiwanikwa Ndiro Zara pakakwirira nemazvo Stainless simbi uye ndarira kubereka gungano. Zviri nyore kuti vaungane uye rinosanganisira rakaisvonaka murayiridzo Chinyorwa uye 45 RPM adapteri.
Ndiyo zvakagadzirwa zvakafanana RP1 asi izvi zvinenge zvakazara mu tsvuku. Simplicity shoko inorondedzera akaitwa chigadzirwa ichi. Uine incredible inzwi uye magadzirirwo, hapana chikonzero kwete kunochitora. Nokuti $ 499, uchazonakidzwa kuwana maoko enyu pamusoro chete nhasi.
Kurira zvinoshamisa uye kwezvokufuka.
Ndicho dzakanaka Magadzirirwo nyore asi ziso-uchibata.
Hakuna kuzvidzora kuti chinja nokukurumidza.
10 • U-Dzokai Audio - Kutenderera Zuva Kwepasi Plus Turntable (zvitema)
12.5 LBS, 5 x 17 X 13 ", 0,125% Iii & flutter, -79 dBA S / N reshiyo, -63 dBA rwakafanana
Made in USA kubudikidza U-Ringirirai Audio, iri kumusoro-unongotaura turntable akatemerwa mutengo pa $ 309. Pasina mubvunzo, izvi zvinoshamisa turntable anouya aine zvakarurama tonearm pamwe Ortofon OM 5E Cartridge, machine psac acrylic mundiro, uye bhuku bhandi nemotokari 33 uye 45RPM.
Zviri nyore chaizvo kuti ungaronga uye kushandiswa. With zviri hwose zvekushandisa rutsigiro, mungadai kubvunza kuzvibvunza chii hazvirevi kuti kuita pamusoro turntable ichi. A guruva kufukidza rca netambo, akanzwa bonde uye rimwe gore garandi kunobatanidzwa muenzaniso uyu. Zvivanakire wako, ive chinjika counterweight kunobatanidzwa uyewo.
Kugadzira akachenjera, zviri zvemapuranga zvitema uye ane kuchiratidza dema uye sirivha. Inotarisira ano asi classy. Narwo zvinoshamisa kurira yepamusoro uye matauriro ruoko huru yepamusoro, muenzaniso uyu anofanira kuiswa nyatsofungisisai kana uri kutarisa kutenga turntable.
Amazing inzwi hwakanaka.
Great matauriro ruoko unhu.